“Mute” ဆိုတဲ့ Feature တစ်ခုကိုမကြာခင်ထည့်သွင်းသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့ Instagram – AsiaApps
“Mute” ဆိုတဲ့ Feature တစ်ခုကိုမကြာခင်ထည့်သွင်းသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့ Instagram
May 23, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on “Mute” ဆိုတဲ့ Feature တစ်ခုကိုမကြာခင်ထည့်သွင်းသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့ Instagram
တစ်နေ့ကို Instagram မှာ မမြင်ချင်လောက်အောင် Post တွေအများကြီးတင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမှာရှိနေပါသလား ? (သို့) Instagram မှာမမြင်ချင်ပေမယ့် အားနာလို့ Unfollow မလုပ်ရတဲ့အခြေအနေ မိတ်ဆွေကြုံတွေ့နေပြီလား ?
ဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေထဲက တစ်ခုခုကို မိတ်ဆွေရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့တော့… ဘာလို့လဲဆိုတော့ Instagram ကမကြာခင်အချိန်မှာပဲ “Mute” ဆိုတဲ့ Feature နဲ့ မိတ်ဆက်တော့မှာမလို့ပါ ?) Mute ဆိုတဲ့ Feature ကတော့ မိတ်ဆွေမမြင်ချင်တဲ့လူတွေရဲ့ Post ကို မိတ်ဆွေရဲ့ Feed မှာတက်မလာအောင်ကာကွယ်ပေးမယ့် Feature ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Unfollow လုပ်စရာမလိုပဲ မိတ်ဆွေမမြင်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့ Post ကို Feed မှာတက်မလာအောင် ကာကွယ်ပေးမှာကြောင့်တကယ်ကို အလွင့်ပါပဲ။ မိတ်ဆွေ Mute လုပ်လိုက်တယ် ဆိုတာကို Mute အလုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမှာမဟုတ်တာကြောင့် မျက်နှာပျက်စရာလည်းမလိုတော့ပါဘူး။ (Ez ?) Post တွေကိုသာမက Story တွေကိုပါတစ်ခါတည်း Mute လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (တော်တော်မျက်လုံးနောက်လာရင်တော့ Story ကိုပါ Mute သင့်ပါတယ် ?)
Post ကနေတဆင့် Mute လုပ်နိုင်သလို Instagram Profile အထိသွားရောက်ပြီးလည်း Mute လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Mute လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ ?
Post ကနေတဆင့် Mute လုပ်ပုံ
Profile ကနေတဆင့် Mute လုပ်ပုံ
Instagram ဟာတော့ “Mute” feature ကိုနောက်တစ်ပတ် update မှာထည့်သွင်းမိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိမှာတော့ အသုံးမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ မိတ်ဆွေရဲ့တာဝန်ကတော့ Mute လုပ်ရမယ့်သူတွေကို List ထုတ်ပြီးစောင့်နေရုံပါပဲ ?)
Android, Instagram, iOS, Smartphone app
စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်တန့်သွားဖို့အလားအလာရှိနေတဲ့ Sony